Izinhlobonhlobo omkhulu lemikhiqizo yezimonyo ngezinye izikhathi ephambanisa, ngoba akubona bonke izidakamizwa ungakwazi ukuziqhayisa izinga layo, futhi uyibanga inkohliso ku ngempela kalula. Izimonyo kusukela "Urban Dickey" funa ekhethekile njengoba izakhamuzi ezivamile kanye ochwepheshe. Phela, izinga le mikhiqizo njalo phezulu.
Indaba le brand
Mark Urban Kwamazinyo yasungulwa eminyakeni eyishumi nanhlanu edlule. Ngalezo zinsuku, wonke uhla beauty lalinabashumayeli shades beige, obomvu pink. Okunye nemibala okuyihlazo, uwasebenzise ukwakheka, bambalwa abantu onesibindi. Umkhuba wokulala imibala yisicefe futhi shades akazange ivumelane Sandy Lerner, futhi wathatha kwakwakhiwa ngesikhathi isinqumo ukunweba ububanzi izimonyo umbala, enze-up awasebenzisa ekudaleni inkampani yabo. Ngakho waba ilungu owasungula delirium Urban Kwamazinyo. Iphuzu eliyinhloko lenkampani kwenzakala bajwayelene Sandy Wendy Zomir. Lokho kubanika, kwaba ngokweqile izimonyo, futhi njengoba nje Sandy, akazange asijabulele lesi paucity imibala elisetshenziswa izimonyo. Banquma ndawonye ngesikhathi kuqhunyiswa i izwe lobuhle, ekukhipheni uhla yayo amathuluzi kanye okungavamile avant-garde imibala.
Ngenxa yalokho sobunye yabo okudala ngo-1996, sabona ukukhanya 10 no-12 lipsticks nail polishes. Minyaka yonke uhla imikhiqizo zandiswa futhi ngokushesha waqala Naked Eyeshadow Palette. Izimonyo zihlukaniswa eliphezulu, kwadingeka ukubunjwa yayo izithako zemvelo, sengihluzekile, awusebenzi sidilike futhi akusho ukulimaza isikhumba. Kungenxa lezi izakhiwo futhi lehlela ku izinkulungwane zabesifazane emhlabeni wonke.
UMbusi Naked - amerikanskanskoy izimonyo brand Urban Kwamazinyo - emelela ubufazi, ubuntu, ukuvumelana kanye ubunjalo, okuholela yokuzibeka.
Izinzuzo elingenakuphikwa imikhiqizo yezimonyo kungabandakanya:
izithako zemvelo ukuthi zisetshenziswa enqubeni ukukhiqizwa;
ezisebenzayo, amafutha, okunomsoco isikhumba;
ukushiyana kwezidalwa ngokuvumelana uhlobo isikhumba;
izinto zemvelo ezakha izimali eziningi musa abangele komzimba. A KaMose Naked (izithunzi) zenzelwe ivumelane yonke akuthandayo, izikhathi kanye ukondleka iyashintsha iyaphupha ibe futhi zemibala ekhanyayo.
Lapho ukuthenga imikhiqizo
ERussia kuphela baqala ukuvela imikhiqizo Naked. Izimonyo ngokuyinhloko athengiswe ezitolo inthanethi izimonyo ethize okhokhelwayo. Futhi, angathengwa e Moscow, eCentral uMnyango Isitolo. Abesifazane abaningi wathenga izimonyo Urban Kwamazinyo yangaphandle ezitolo inthanethi ezifana eBay, HQhair, Macys, Lookfantastic, sephora, kanye website yabo esemthethweni.
Urban Kwamazinyo brand ukhiqiza anhlobonhlobo imikhiqizo yezimonyo. Lesi sigaba ejenti for iso makeup, okubandakanya primer, Mascara, izimonyo remover, eyeliners namashiya, ezambiwa, eyeshadow Naked.
Lip Izimonyo Yaziwa lipstick yayo, bezinto, amakhrayoni. Isigaba Amathuluzi ukwakheka inikeza kwenziwa izisekelo kokuthona, izimpushana, izifutho zokuthola izimonyo, othi awube, concealer highlighter.
«Naked» - izimonyo, ihlukaniswe yaba izingxenye ezimbili. Eyokuqala - palette langempela izithunzi, kwesibili - ngaphansi izimonyo.
Mayelana palette umbala izithunzi
izithunzi Naked Reticulation kuyinto 12 shades. Ezintathu kuzo basonta mat, abanye abayisishiyagalolunye - ukuze Habib. Ingabe ethandwa kakhulu emhlabeni Pallets ukwakha yemvelo ukwakheka. Lezi shades kukhona okudingeka bashintshashintshe ngayo futhi kuhambisana abanikazi ehlukile wamehlo. Ngemva kwesikhathi esithile, inkampani ukhiphe wamatshana Naked Naked 2 no-3, ziye zaba esisemqoka bese uqedela iqoqo lakho sethunzi abesifazane abaningi.
Reticulation emelela umqondo wokuthi owesifazane enhle ngaphandle ukwakheka, sibonga ubuhle bemvelo. Azikho imibala zomile, futhi umbala ngamunye has eliphansi okuhambisanayo kuye. Shadows kahle esikhunjeni ethayiphiwe kalula ibhulashi, musa ewa emini bese abe umbala ocebile.
isethi ngayinye has version kwecala primer Eyeshadow Primer Potion, okuyinto umane kumele isetshenziswe ngaphansi ukwakheka Naked. Shadows ukusetshenziswa yayo bheka lemukelekako igcinwe kuze kube amahora angu-24.
Futhi hlela kuhlanganisa ibhulashi lokusebenza futhi Ukufiphaza amafu travel iphakethe, okuyinto njalo umbala Ukugunda of ushokoledi ukuthatha nawe. Kuhlanganisa imibala ezifana:
Virgin - matte isikhumba tone. owacishe okuhlanganisiwe lapho sihlala esikhunjeni. It sisetshenziswa njengoba base, ngaphansi ishiya kanye ekhoneni engaphakathi iso.
Sin - pearlescent satin ibala lesikhumba. Ngokuvamile esetshenziswa "gqamisa" iso.
Naked - matte umthunzi yokukhanya amathoni beige.
Sidecar - umbala zethusi, abasebenza ngazo ungakha umphumela kulokolokoza ukukhanya.
Buck - matte umbala isitini. Idonsa ukunakekela crease on the ijwabu leso.
Half Baked - umbala liqhakazile unina pearl. Ungakwazi ukwengeza amehlo futhi inhlansi kancane imfihlakalo;
Smog - pearl umthunzi ocebile ensundu. Isetshenziswa ukuqedela ukwakheka iso.
Darkhorse - pearlescent brown umbala ephethe tinge kancane marsh. ubuhle wakhe kanye nokujula sihamba acwazimulayo Lights. Professionals ngokuvamile umthunzi e crease leminyaka yakhe.
Athosiwe - ne lutho engaqhathaniswa umbala umthunzi itiye rose, asetshenziswa njengoba umbala eyinhloko.
Hustle - elikhanyayo iplamu umbala nokukhanya ithinti ensundu.
Creep - black ezijulile. Balungise ekhoneni elingaphandle iso, futhi ngokuvamile ugcizelele nentaba umugqa ukuqhuma;
Gunmetal - grey metallic, pearl umthunzi enhle eyisisekelo.
Usizo lwabenza imisenenzi Naked Face izimonyo zihlanganisa imikhiqizo efana liquid isisekelo isisekelo, BB-ukhilimu, ukhilimu powder, ubuso compact powder. Zonke izimali ngu-nanhlanu imibala. Kukhona powder efana Ukuphazima futhi crumbly zakudala. Kufaka kulesi sigaba concealers futhi esisetshenziselwa othi awube.
Zonke imikhiqizo yakhiwa izithako zemvelo ukuthi ngomusa anakekele isikhumba sakho nsuku zonke, ukuze awuvikele omubi nomthelela wendawo ezungezile kubantu. Ziyakwazi ozinzile futhi akudingeki ukuba ulungise emini, ikakhulukazi uma usebenzisa i-primer. Izimonyo brand nge value ephansi kungase kungasheleli ngaso sonke unikeze yi efanayo.
izimonyo Professional oveza sha Urban Kwamazinyo, kuyabiza futhi akuhlali kutholakala ukuba abantu abavamile emgwaqweni. Ngakho, izithunzi Iphalethi Naked ukunikeza abesifazane abaningi kusukela 2000 ruble 3000. Wehlisa izindleko yawo asikisela manga. izisekelo okuphelele, izimpushana futhi BB okhilimu nazo kulesi sigaba intengo. Intengo ezitolo inthanethi uyahluka ruble 2,000.
Le mikhiqizo akuzona ezishibhile, kodwa isifiso ezithile izimo zivuma yilowo nalowo wesifazane. Izimonyo Brands nezinye izinkampani noma ezikhanga wentengo ezikhangayo, kodwa ngokuvamile akuzona njengoba ngempumelelo nakahle njengoba lezi zimali.
Phakathi kwabesifazane Russian minyaka buthola imikhiqizo udumo Urban Kwamazinyo. Lezi zintokazi bathi ivelele phakathi lonke uhla imikhiqizo ukugcoba izinga layo eliyingqayizivele. Ngeke bashintshisane enye, futhi namanje abawubonanga izithunzi elikhulu kangaka. izimonyo izimonyo kungukuthi ezigcotshwe futhi akusho ukusakaza usuku lonke. It has a shades eyingqayizivele kanye original, ukuthungwa ukukhanya. Shadows uyithayiphe ngokushesha ibhulashi, kahle esikhunjeni, ngokuvamile umbala izithunzi ebhokisini kuvumelana umthunzi etholwe ngemva kokufaka izimonyo. Compact Case Iphalethi ikuvumela uzigqoka njalo naye, ngoba konke okudingayo ukuze ube yemvelo kanye kwansuku ukwakheka.
Ladies Kuyaqapheleka futhi ukuthi uma kusetshenziswa umthunzi primer ubambe amahora angu-24, futhi ngaphandle kwalo - mayelana 7. Shadows neze iphuma futhi ezigcotshwe. Abaningi ungathandi primer ukuthi unamathele. Kuthiwa ukuthi osindayo engu ngibenze ngokushesha ulahlekelwe ukubukeka yayo yasekuqaleni, ngakho abesifazane abaningi ngokuvamile ukulishintsha kwenye.
Kukhona abesifazane amakhasimende abayithanda ukuphelela ifaniswe palette umbala. Bathi zihlale efanele futhi efanelekayo nsuku zonke ukwakheka, futhi ebusuku usekukhanyeni blondes futhi brunettes. Kubukeka ezibizayo futhi ziyabukeka, dwebela isitayela umnini wayo. Kukhona nabesifazane abagada, kunalokho, unganelisekile imibala okwethulwa palette, futhi phikisana lowo they cha are kufanela wonke umuntu.
Futhi, naphezu impendulo negative, ka Naked Izimonyo iwine Izibuyekezo eziningi ngenxa yamakhono futhi iye yasetshenziswa ngempumelelo yi ochwepheshe ephezulu nokucwala abesifazane abavamile, ukuthi ayebiza kakhulu.
"Kaltsid + Magnesium" --ejenti yemvelo yokuvimbela kwamathambo kanye yamathambo